Supermarket tsara amidy amidy any Dubai - BusinessFinder.Me
Fahazoan-tsakafo ny fahazoan-dàlana ary ampiasaina ho suppermarket aho. Toeram-pivarotana 3 no misy ary 110000 ny hofan-tany lany andro amin'ny 17,09,2021 Lisitra dia anaran'ny olom-pirenena kanadiana miaraka amina mpiara-miasa 2. Mametraka 20000 Mangataka vidiny 160000 miaraka amin'ny vola manan-danja, tahiry, fahazoan-dàlana, izy ...
Location : Al Baraha, Deira, Dubai, UAE
Fahazoan-tsakafo ny fahazoan-dàlana ary ampiasaina ho suppermarket aho.
Fivarotana 3 izy ary 110000 ny hofan-trano
Tapitra ny fahazoan-dàlana amin'ny 17,09,2021
Ny lisansa dia manana anarana olom-pirenena kanadiana miaraka amina mpiara-miasa 2.
Ny fangatahana vidiny 160000 miaraka amin'ny vola lehibe, stock, licence, talantalana, chiller, frizer ary friges an'ny orinasa.
Antony fivarotana. mifindra any Canada miaraka amin'ny fianakaviana.
WhatsApp olona liana
Toerana tsara eo akaikin'ny hotely fisakafoanana trano fisakafoanana ary toerana fizahan-tany sy fizahan-tany.
Toerana al baraha daira
#Fivarotana lehibe amidy any dubai
#Nasaina hamidy amidy ao amin'ny Supermarket Dubai amidy